10 Eyona Ndawo zintle zokuwa eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Eyona Ndawo zintle zokuwa eYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 10/07/2020)
Iinqaba zexesha eliphakathi, izidiliya, ekumeni oluhle, zizinto nje ezimbalwa ezenza iYurophu ilungele iholide yokuwa. Isixeko ngasinye saseYurophu sinomtsalane waso, kodwa indawo esiya kuthi 10 Iindawo zokuphumla ezilungileyo kakhulu kuluhlu lwaseYurophu zizinto ezimbalwa kakhulu iindawo ezintle.
I-Yurophu imangalisa ngakumbi ekwindla xa imithi kunye neenduli zipeyintwe kwiorenji eqaqambileyo, bomvu ovuthayo, tyheli. Ekupheleni kuka-Okthobha, bambalwa abantu ezitratweni, kwaye oku kuthetha ukuba uza kuba nezimvo ezintle zokuwa ngokwakho. Ukuwa lixesha elihle lokuhamba kuba ihotele kunye namaxabiso okuhamba ehla kakhulu.
Kulula kwaye kukhululekile ukuhamba kuzo zonke iindawo ezimangalisayo kuluhlu lwethu ngololiwe. Ukusuka eLoire Valley eFrance ukuya eLuxembourg, Ukuhamba ngololiwe kulungele ukucwangciswa kweholide engalibalekiyo eYurophu okhe wanayo ukuza kuthi ga ngoku.
1. Ukuwa kweholide eMbria, ElamaTaliyane
Ngelixa abaninzi bakhetha iTuscany ngeholide yokuwa eYurophu, Ingingqi yase-Umbria e-Itali ichukumiseke ngakumbi kwaye yenye yezona ndawo zintle zokuhamba eziya eYurophu nase-Itali.
Ifikeleleka ngokulula ngololiwe eRoma, I-Umbria ibonelela izihlwele ezimbalwa kunye namaxabiso aphantsi okuhlala e-Italy. Ekupheleni kukaSeptemba ukuya ku-Okthobha, you can enjoy the white truffle and new wine festival in towns like Gubbio. kwakhona, ungaya ePerugia ngomnyhadala wonyaka we-Euro. ke, I-Umbria imalunga nokuzikhuphela ngokwakho kumhlaba omkhulu, ukonwabela ukutya okufanelekileyo kunye newayini ngexesha leholide yakho yokuwa eYurophu. Ngexesha elifutshane okanye elide, Uhlala kwindawo eneposikhadi yothando, kwenye yezona ndawo zintle zeholide eYurophu.
IFlorence ukuya e-Orvieto amatikiti
Amatikiti eSiena ukuya eOrvieto
IAzzo ukuya kwitikiti laseOrvieto
I-Perugia ukuya kwitikiti laseOrvieto
2. Cinque Terre, ElamaTaliyane
Iifoto ezikwi-Intanethi azenzi okusesikweni nge umlingo Cinque Terre kwingingqi e-Itali. Izindlu ezinemibalabala encotsheni yeenduli, ujikelezwe zizidiliya, indawo yokutyela yasekhaya, yaye bentaba, Zonke zenza lo mmandla ube ngumkhenkethi omangalisayo wokuhamba oya eYurophu. Cinque Terre eneneni iqulethe 8 iilali ezincinci kunye nomgaqo kaloliwe ohlanganisa zonke omnye komnye. Oku kwenza ukuba kube lula ngakumbi ukutyelelwa nganye yeelali ezikuyo 2-3 iintsuku ukuba umfutshane ngexesha. Yintoni enokuba ngcono kunokuba uloliwe ngokutsiba kwenye yezona ndawo zibalulekileyo eYurophu ekwindla?
I-Cinque Terre ihlala iyindawo eshushu yehlobo kwiilwandle kunye neepistine zamanzi. kunjalo, Kungcono ukutyelela ukuwa, kuba izitrato ezincinci azinalutho kubakhenkethi. ngoko ke, ngelixa iivenkile zokutyela ezininzi zivaliwe, usenokufumana isarha evulekileyo ejonge ulwandle kwaye uthandise iimbono ngokuzola.
Ungachitha 4 iintsuku zokuhlola iilali kunye nokuchitha impelaveki kwisixeko saseLa Spezia, indawo yakho yokuqalisa yokuhamba ngololiwe eCinque Terre. Isuka eLa Spezia, uqeqesha ukuya kwilali oyikhethileyo.
I-La Spezia ukuya kwitikiti laseManarola
Amatikiti eRiomaggiore aya eManarola
Amatikiti eSarzana ukuya eManarola
Amatikiti eLevanto ukuya eManarola
3. Ichibi laseLugano, Swizalend
Amanzi aqabileyo e-turquoise, izindlu ezinemibala e-terracotta, ichibi iLugano eSwitzerland yenye yezona ndawo zethu ziphambili zokuhamba esiya eYurophu. ISwitzerland ineendawo ezininzi ezothusayo zeholide ezingalibalekiyo eYurophu kwaye iLugano yenye yeezithsaba zaseSwitzerland.
Iqondo lobushushu lisafudumele phakathi ku-Okthobha, ukuze uhlale ngaselunxwemeni ngeglasi ye wayini evela kwizidiliya ezikujikelezileyo okanye ungcamle isidlo sepomenta kwitheko lasekwindla. Ukuba unomdla wokudibanisa imincili kunye nokuzonwabisa kwiholide yakho yokuwa eYurophu, you can hike up Monte Bre. Iimbono ezivela kwincopho yezinye zeemeko eziphefumlayo zeLugano Bay.
Idolophu yakudala yaseLugano ineedolophu ezinemibala emihle, 10 izikwere, kunye nesitrato esinexabiso lentengiso iVia Nessa. Eyona nto iphambili, ILake Lugano ilungile kubo bobabini abakhweli bendalo nabanothando. Ichibi laseLugano liyoyikeka impelaveki yokuphumla okanye iholide eyandisiweyo eYurophu.
Ungahambela ngokulula ukuya echibini laseLugano ngololiwe ukusuka eMilan Central kwisithuba esingaphezulu kweyure. Oololiwe bashiya iyure nganye kwisikhululo sikaloliwe saseMilan.
Iitikiti zangaphakathi kunye
I-Lucerne ukuya kwitikiti laseZurich
Amatikiti eLugano ukuya eZurich
I-Geneva ukuya kwitikiti laseZurich
4. Ukuwa kweholide eHannover, Jemani
IHannover sesona sixeko sisezantsi eJamani, kodwa yenye yezona ndawo zintle zokuhanjiswa kweholide eYurophu. Esi sixeko sikhulu likhaya lepaki enkulu, Ubukhulu beCentral Park eNew York. Ancient oak trees and a ichibi elihle zikumhlaba wepaki, Ilungele ukuhanjiswa kweenqanawa kunye nemini enevila ekwindla.
IMarktplatz Idolophu endala kunye neewashi yindawo entle yokuqalisa uyilo lweGothic. Ungaqhubeka kwiholo entle yeDolophu, Isakhiwo esikhulu-njengebhotwe elijonge ichibi. Imihlaba eluhlaza kunye nemithi ejikeleze isigodlo esihle kwaye agqibezela ubume obuhle kwaye ajonge ngemibala yegolide.
IHannover yenye yegugu laseJamani kwaye ayinakubekeka kwindawo entle ukuwa. Ukuba ucwangcisa iholide yokuwa kwiYurophu, emva koko iHannover yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhamba. Ababaninzi abakhenkethi abaye bafumana umlingo wayo okwangoku, njalo, ungangowokuqala ukuba nexesha lobomi bakho esixekweni.
Amatikiti eBremen ukuya eAmsterdam
I-Hannover ukuya eAmsterdam amatikiti
Amatikiti e-Bielefeld ukuya eAmsterdam
I-Hamburg ukuya eAmsterdam amatikiti
5. IiBavaria Alps kunye neHlathi eliMnyama, Jemani
Ihlathi eliMnyama kunye neBavaria Alps lukhetho oludumileyo lweholide yosapho oluwayo eYurophu. Lo mmandla umangalisayo eJamani yenye yezona ndawo zintle zokuhamba eziya eJamani.
Xa usuka kuloliwe kwenye yeelali ezintle, Uya kuziva kwangoko ukuba usondele ngqo kwibali leBraim Grimm. Amachibi emangazayo, iingcingo zamanzi zeTribgi, izihlambo eziluhlaza, kwaye iidiliya ziqinisekisa ukhenketho olungalibalekiyo lokuwa eYurophu.
Amagqabi atshintsha imibala kwiitoni zegolide, ngelixa ngasemva kukho iintaba ezigqunywe likhephu. Ukuphumla kwikhabhathi yamaplanga emva kokuhamba kakhulu kwiiAlps ngamava angalibalekiyo. Ungandwendwela enye yazo 25 inqaba kwingingqi kunye Neuschwanstein Inqaba yinqaba emangalisayo yokuhlola kwiholide yakho yokuwa eYurophu.
I-Offenburg ukuya kwitikiti laseFreiburg
I-Stuttgart iya kwitikiti laseFreiburg
I-Leipzig ukuya kwitikiti laseFreiburg
I-Nuremberg ukuya kwitikiti laseFreiburg
6. Ukuwa kwiholide e-Ahornboden, Ostriya
IRissbachtal Valley kunye Ipaki yeKarwendel Alpine, Indawo entle yokundwendwela e-Austria ikhefu lekhefu. Indawo yeAlpine yeAhornboden ine 2,000 Iminyaka emide yeSycamore-Maple ijongeka imangalisa ekwindla yayo yengubo yegolide kunye neorenji. Indalo kunye neentaba zenza indawo entle entle engalibalekiyo yohambuko lokuhamba oluya eYurophu.
Lo mmandla waseTyrol ucetyiswa ngokukhethekileyo kwiibhayisikile zentaba kunye nabahambi abanamava. the Ipaki yelizwe ineendawo ezininzi ezihambahamba ngeenyawo kunye neendlela phakathi kweentaba zelitye ezona zingenakulibaleka eYurophu.
ISundowns ilungile 3 iiyure kude ne-Ahornboden ngololiwe, kubandakanya ukutshintshwa. Ukwengeza, kukho ukuthengisa okuhle kwihotele kunye nokukhethwa kwindawo yokuhlala eGrosser Ahornboden ngexesha lonyaka ongekho.
7. Ukuwa kweholide kwiLoire Valley, Fransi
Tyena iLoire Valley ikummandla we wayini yeFransi. Oku kuthetha ukuba 185,000 iihektare zemidiliya zikhanyise kwigolide ngasekupheleni kuka-Okthobha. Kungenxa yoko le yenye yezona ndawo zintle zokutyelela eYurophu kunye nendawo entle yokuhamba iholide.
Ngelixa ezininzi zithatha i uhambo losuku ukusuka eParis, Kunconyelwa kakhulu ukuba uhlale impelaveki ende eLoire Valley ukuze uyixabise ngokupheleleyo imilingo kunye nobuhle bayo. Le ndlela, ungandwendwela enye okanye ezimbini zeendawo ezinqabileyo entilini, njengeChateau de Chambord. Abanye bathi le nqaba imangalisayo yayilwa nguDe Vinci ngokwakhe.
the Inqaba yeChambord i 2 hours south of Paris and you can train travel from Paris Austerlitz to Blois-Chambord. Within an hour and a half, uya kube ujikeleza ibhotwe elihle.
I-Paris ukuya kwitikiti laseStrasbourg
ILuxembourg ukuya kwitikiti laseStrasbourg
Amatikiti eNancy ukuya eStrasbourg
I-Basel ukuya kwitikiti laseStrasbourg
8. Bordeaux, Fransi
Akukho nto inomtsalane kunye nothando ngaphandle kweFrance ekwindla. IBordeaux sisixeko esingaphantsi kwesiqhelo saseFrance kunye nekhaya lezidiliya zaseSaint-Emilion kunye namachibi eArcachon, le 2 Iindawo ezimbalwa zezizathu ezizokwenza ukuba uthandane neNouvelle Aquitaine eBordeaux. izigodlo, ukhenketho lwe wayini, Unyango lwe-spa, kunye nezifundo zokupheka, yenza iBordeaux indawo entle yokundwendwela iholide yakho yokuwa.
Ekupheleni kuka-Okthobha uninzi lwabakhenkethi babuyela ekhaya, ngoko ke amaxabiso okuhamba nawendawo yokuhlala ahla eBordeaux. Ngeli xesha iidiliya ziqala ukuvuna iidiliya kwaye ungahlala kwenye yezi chateaux ezininzi kule ndawo kwaye uphine. Ngokuqinisekileyo oku kuya kongeza a nakho okumangalisayo kwi-albhamu yakho yeholide.
Ummandla mkhulu ukufikelela kuwo ngololiwe ukusuka naphi na eFransi, kwaye kukho ngqo oololiwe-high speed ukusuka eParis-Austerlitz nakwizikhululo zoololiwe zaseMontparnasse.
La Rochelle ukuya eNantes amatikiti
Toulouse ukuya eLa Rochelle amatikiti
Bordeaux ukuya eLa Rochelle amatikiti
I-Paris ukuya eLa Rochelle amatikiti
9. Ukuwa kweholide eParis, Fransi
Uluhlu lwethu lweholide oluzihle kakhulu kuluhlu lwaseYurophu alunakugqitywa ngaphandle kweParis. IParis ihlala ilicebo elilungileyo, kodwa iyathandeka kakhulu ekwindla. Luxembourg Gardens, ikhefi ezincinci zaseFrance, kunye nomculo wasesitratweni ophilayo yenza useto olufanelekileyo lweholide engalibalekiyo eYurophu.
Sipa itshokholethi eshushu okanye ubukele umnyhadala wesivuno seMontmarte, IParis ineendawo ezininzi ezintle zokuqhawula loo mifanekiso intle. Ezona ndawo zibalulekileyo zefotogen yiJardins du Luxembourg, Parc Monceau, kunye neGadi yeTuileries. Ukusukela ekupheleni kuka-Okthobha, kukho umnyhadala wasekwindla wonyaka kwiindawo ezahlukeneyo kuwo wonke umzi womculo, Umdaniso, kunye nemisebenzi yobugcisa. ke, ukuba kuyanetha okanye kuyanetha, IParis inikezela ngezinto ezininzi ezintle ezenziwayo.
I-Paris ayinabantu abaninzi kwaye amaxabiso okuhamba afika kakhulu ngexesha lonyaka, ke uloliwe wokuhamba kunye nendawo yokuhlala yenza ukuba iParis ibe liholide elihle lokuhamba kwindawo yeholide yaseYurophu.
10. Amsterdam, elamaDatshi
Ngexesha lentwasahlobo, ii-tulips ezihombisa igadi kunye neepaki zeAmsterdam, kodwa ekuweni, orenji, umbala ophuzi nobomvu unemibala yemijelo nakwizitrato. IAmsterdam bubuhle obugqibeleleyo kwaye ke yenye yezona ndawo zintle zokuwa kweholide eYurophu. Ungahamba ngeAmsterdam kuphela 3 iintsuku, kodwa uzakufuna ukuhlala ixesha elide kwaye ume kuwo onke amagumbi ukuxabisa iimbono ezintle.
IAmsterdam sisixeko esimangalisayo leholide eYurophu, nge 50 iimyuziyam kwisixeko, ekhwela umkhumbi kwimigodi, zininzi izinto ezintle omele uzenze kolu hlobo lokuhamba olumangalisayo oluya eNetherlands. Ukwengeza, Kukho iipaki ezimangalisayo apho unokuba nepikniki okanye ibhayikhi ejikeleze ukuba imozulu intle.
IAmsterdam sesinye sezona zixeko zihle kakhulu eYurophu, ifikeleleke ngololiwe ukusuka naphi na kumazwe angabamelwane, kwaye kulula ukuhamba kuyo phakathi kwesixeko.
Iibhasi eziya kwitikiti laseAmsterdam
Amatikiti aseLondon ukuya eAmsterdam
Amatikiti eBerlin ukuya eAmsterdam
Amatikiti eParis ukuya eAmsterdam
bonus: Ukuwa kweholide eLuxembourg
Bheljiyam, Fransi , kwaye iJamani ijikeleze ilizwe elincinci laseLuxembourg, indawo egqibeleleyo yokundwendwela eya eYurophu. Isixeko saseLuxembourg sidume njengeDolophu yakudala, Ihlala ematyeni kwaye ijikelezwe yinqaba yamaxesha aphakathi. Uyilo lwayo olothusayo kunye nomtsalane wehlabathi-elidala uzifumanele isihloko se UNESCO zamagugu isayithi. I-Grand Ducal Palace kunye ne-Adolph ibhulorho kufuneka-ibone amabala kwiholide yakho ukuya eLuxembourg.
Iigadi kunye neemboniselo ezininzi zinika umbono ophefumulayo womzi wonke kunye nezi zijikeleze wona. ekwindla iimbono zintle kakhulu kwimibala e-autumnal. ke, ngelixa iLuxembourg sesona sixeko sikhulu eYurophu, imile ikhukhumeleyo ecaleni kwezixekokazi ezinkulu zelizwe ezinjengeParis. Ngokuqinisekileyo kufanelekile ukukhetha iLuxembourg ngeholide yakho eYurophu ekwindla.
Enkosi kwiinkonzo zesiporo eziphambili, ungahambela naphi na eYurophu kungabikho xesha. Ukusuka kwisixeko esikhulu sommandla wonke ukuya kwisixeko esincinci kunye esimangalisayo, yonke imizi kwiyethu 10 iidolophu eziphambili zeholide yokuwa eYurophu, has its unique charm and magic.
Iibhasi ukuya kwitikiti laseLuxembourg
Amatikiti e-Metz ukuya eLuxembourg
Amatikiti eParis ukuya eLuxembourg
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ufumane amatikiti asezantsi exabiso eliphantsi ukuya nakuphi na ukhenketho oluhle kuluhlu lwethu.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Eyona Ndawo zintle zokuwa eYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-fall-vacations-europe/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)